jeudi, 10 mars 2016 22:08
Andranomanalina Afovoany : Trano may
Trano maro no potika noho ny hay trano niseho omaly alina tokony ho tamin'ny 10 ora teny Andranomanalina Afovoany, izany dia vokatry ny "court circuit" nisy teny an-toerana, izay nahatonga ny loza. Tsy nisy ny aina nafoy, fa dia olona vitsivitsy no naratra ary entana maro no potika sy rava. Ny mpamonjy voina, araka ny filazan'ny olona teny an-toerana dia tara tamin'izao famonjena voina nitranga izao, koa manaitra ny mpamonjy voina izy ireo mba handray ny andraikiny manoloana izao tranga izao, ary tokony hiasa andro aman'alina izy ireo.
jeudi, 10 mars 2016 15:36
Antsirabe Sambava : Ady tany atahorana hitarika fifamonoana
Mampanahy mafy ny zava-misy any Antsirabe Sambava. Nisy andian’olona nanao anjolofo niditra sy namotika ny zava-maniry rehetra amin’ny tany manan-tompo mirefy 19 ha, manana titra “222 S” tamin’ny 1 desambra 1999. Nilanja zava-maranitra toy ny famaky, antsibe ireo andian’olona. Niezaka nanohitra ny mpiambina ny tany saingy tratry ny be noho vitsy ka nihemotra. Potika avokoa ny boaderôzy, voamboana, jirofo sy lavanila naniry tamin’ny tany. Nidina tao an-toerana androany maraina ny lehiben'ny Fokontany Antsirabe, Rafalimana sy ry zareo avy ao amin'ny Sampandraharahan’ny ministeran’ny fambolena notarihin’i Rakotomalala Noely nijery ny zava-nisy. Milaza ny hiverina amin-kery ireo andian’olona maro, etsy ankilany ny fianakavian'ny tompon'ny tany tsy hipetra-potsiny fa hanohitra. Inona ny zavatra hitranga ? Ho avela hisy tapa-doha toy ny tany Ambohimanarina Lokoho, vao tsy ela, ve vao handray andraikitra ny Fanjakana ?
jeudi, 10 mars 2016 12:08
Tanambaon’Ifosa : Nahazo rano avy amin’ny herin’ny masoandro
« Equipement d'un village de Brousse en eau, par système de Pompage solaire». Io no tanjon’ireo andiana mpianatra avy any amin’ny Lycée Technique Marseille-Frantsa miaraka amin’ireo mpanabe miisa telo, Gerard Bonanno, Alexandre Teston ary David Vieilledent, mitarika azy ireo. Ny tanàna ambanivohitra Tanambaon’Ifosa, Kaominina Anjanoveratra Sambava no voafidy hametrahana tetikasa rano fisotro madio, misy paompy 5 sy fanasan-damba izay samy mampiasa rano sintonin’ny milina mihodina avy amin’ny herin’ny masoandro avokoa.
mercredi, 09 mars 2016 16:48
C-For-C : Hanohana ny vehivavy ao Antsirabe
Hanohana ireo vehivavy latsaky ny 30 taona ao Antsirabe amin’ny sehatry ny fihariana ny ONG C-For-C, izay nanokatra ny sampana ao an-toerana. Fantatra io tamin’ny fanazavana nomen’i Sitraka Nantenaina, tompon’andraikitry ny fikambanana. Ny tetikasa “Youth Women Win”, no entin’izy ireo ao Vakinankaratra, izay efa misy any Belzika sy Guadeloupe ary izao eto Madagasikara izao. Ny hanampy ireo vehivavy miasa tena ka ho lasa mpandraharaha no tanjona ary ny hanosika azy ireo bebe kokoa ary hanao fifanakalozana amin’ireo firenena roa hafa amin’izay fanohanana ny vehivavy izay.
mercredi, 09 mars 2016 09:50
Antsirabe II : Efa mahazo laka ny miralenta
Azo lazaina fa efa miha mahazo laka ny miralenta sy ny fampandraisana anjara ny vehivavy raha ho an’Antsirabe II. Ny Kaominina Antsoantany moa no nanamarihana ny Andron’ny 8 marsa nankalazana ny andro ho an’ny fitovian-jo ho an’ny vehivavy. Nandritra ity hetsika ity no nametrahana ny Ben’ny tananan’Antsoantany, izay vehivavy voalohany hitantana izany Kaominina izany. Ny lehiben’ny Distrika, izay vehivavy ihany koa, no nitarika ny lanonana ary ny Depoite Ravelohanitra Nirina no nanotrona izany mazava ho azy, izay reny mpiahy ity andro ity isan-taona, ho an’Antsirabe II.
Randrianasolo Hanitra Solonirina - Lehiben’ny sampandraharahan’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy
mercredi, 09 mars 2016 09:44
Ambano : Kaominina anjakan’ny herisetra ao Antsirabe II
Na dia efa misy fivoarana aza ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin’ny raharaham-panjakana dia azo lazaina fa mbola misy ireo kaominina sasany anjakan’ny herisetra ao Antsirabe II ao. Nambaran-dRtoa Randrianasolo Hanitra Solonirina, lehiben’ny sampandraharahan’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, Distrikan’Antsirabe II fa ny Kaominina Ambano no mitana ny laharana voalohany amin’izany, arahin’ny Kaominina Ambohibary-Sambaina ary laharana faha-5 eo ho eo ny Kaominina Antsoantany, araka ny fitarainana azon’ity sampandraharahan’ny mponina ity.
Niala tsy ho Tim instony Mamy Rakotoaivelo
lundi, 07 mars 2016 22:33
TIM : Nametra-pialana i Mamy RAKOTOARIVELO
Nametra-pialana io hariva io i Mamy RAKOTOARIVELO tsy ho isan’ny mpikambana ao amin’ny antoko Tiako Madagasikara intsony.
lundi, 07 mars 2016 19:31
Antsahamanitra : Vola roa baoritra lasan’ny jiolahy mitam-basy
Volana toby mpaninjara solika iray eny Anosizato, handeha harotsaka any amin’ny banky BMOI Antaninarenina no lasan’ny jiolahy mitam-basy teo ampiakarana an’Antsahamanitra androany misandratr’andro.
lundi, 07 mars 2016 12:13
8 marsa: Fitiliana momba ny homamiadana mpahazo ny vehivavy
Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny vehivavy dia hanao hetsika fanentanana momba ny homamiadan'ny nono sy ny fitiliana no homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza etsy amin'ny CFM anosy ny JCI ilon'arivo sy ny fondation BOA miaraka amin'ny sampandraharaha misahana izany etsy amin'ny HJRA rahampitso 08 marsa. Vehivavy miisa 300 ihany no raisina ka 20 hatramin'ny 50 taona efa nanao firaisana ara-nofo ihany no tiliana.
samedi, 05 mars 2016 07:18
Farafangana : Hasiana « lot » amin’izay ny trano
Niatrika fiofanana momban'ny fenitry ny toeram-ponena an-tanan-dehibe ireo tompon'andraikitry ny sampandraharaha voakasik'izany sy ny mpitantana ny Kaominina ao Farafangana an-drenivohitra. Isan'ny fahalalana nomena tamin'izany ny fomba fanorenana foto-drafitrasa sy ny taotrano mahatanty sy afaka miaro amin'ny voina mety hitranga na voajanahary na tsia, eo ihany koa ireo lalàna mifehy ny toeram-ponenana an-tanandehibe, ary ny karazan-ketra azon'ny Kaominina hanatsarana ny fidiram-bolany.